Okooko osisi ndị e ji ajị anụ mee
Ogologo ulo obula achikota nkpu. Na mgbakwunye na ịme usoro usoro ịdị ọcha, ọ ga-ekwe omume ịmepụta nkà dị iche iche nke obere diski owu, dịka ọmụmaatụ, okooko osisi. Ihe okike ndi a na-achota onodu ha, obuna ma ha adighi ndu, ma ha mere ihe ndi ozo. Ị nwere ike ịrụ ọrụ n'onwe gị, ma anyị nwere ike ikwu na ụmụ gị ga-arụ ọrụ. N'ihi ya, a pụrụ inye nne, nne nne ma ọ bụ nwanna nwanyị ọrụ njikọta.
Okooko osisi sitere na owu owu - ihe dị mkpa
Iji rụọ ọrụ ị ga-achọ ntakịrị, ya bụ:
owu wiil onwe ha;
agbatị maka ịṅụ mmanya ọṅụṅụ;
akara ma ọ bụ marker chere edo edo;
Okooko osisi ndị a na-eji ajị anụ - otu ọkwá mara mma
Mgbe ihe niile ịchọrọ dị, ị nwere ike ịmalite ịmepụta akpụkpọ anụ na nchara ncha site na owu na-acha owu - kpọọ. Ya mere, gbasoo ntuziaka nzọụkwụ site na ntinye:
Iji mepụta ifuru, malite na agba nke njedebe nke owu na-acha odo odo na akara ma ọ bụ pen-tip pen.
Mgbe nke ahụ gasịrị, tinye akwa swab na mmanya mmanya, ma ọ bụghị miri emi, mana naanị na-ezochi ya akara ngosi. Debe diski okpu n'okpuru ntutu osisi na njedebe nke tube, dịka na foto.
Mgbe ah u, jiri nway oo jiri obere aka nke nri ma obu aka ekpe ruo n 'on od u ala nke nkedo owu. Ejila gluu dochie ya, ma ọ ga - eme ka ọ na - agagharị n'akụkụ ya na mgbe ị na - asacha ya ga - agbacha nwa n'ọdịnihu na agba odo odo.
Na-agbanye ọnụ ala nke owu ajị, si otú ahụ na-eme ka nwa okoro yiri nke a. Ị nwere ifuru na-acha ajị anụ.
Tinyegharịa nzọụkwụ 1-4 ugboro ugboro ka mechaa mepụta callas ọzọ abụọ. Okooko osisi nwere ike ijikọta na bouquet, tinye ha na mpempe akwụkwọ acha akwụkwọ ndụ.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị na-eme ka callas jiri aka gị mee, ị nwere ike ịmepụta ngwa ma ọ bụ kaadị . Gịnị abụghị onyinye maka March 8 ma ọ bụ ụbọchị mama? Otú ọ dị, kaadị onye mbụ nwere ike ịbụ ezigbo onyinye maka ezumike ọ bụla.
Kedu otu esi eme akwa akwa vampire?
Onyinye si n'aka sọks site n'aka aka
Okwuru na oche
Crafts maka Ista na aka ha
Blanket maka aka nke aka amu
Kedu otu esi enweta onyinye n'ime akwụkwọ?
Osisi Krismas nke obi
Ọkachamara nke karama plastic
Guzo onwe gi aka mma
Ejiri aka gị na-eme ihe mkpuchi nna - otu ihe na-aga nke ọma
Ngwurugwu - ihe omimi
Lush pancakes si courgettes - uzommeputa
Nnukwu ụlọ mkpuchi
Mgbakwunye na ntutu isi - ihe niile banyere usoro ewu ewu
Kedu ihe ị ga-eyi jaket gbatịrị agbatị?
Kedu ka esi eme ventilashion na okpuru ulo?
Na-arịgo Roses, blooming niile okpomọkụ - oyi hardy iche
Salad na mushrooms na carrots
Tart na piich nwere ike
Kedu otu esi eme ka mpeepe nke akwụkwọ?
Mkpụrụ a mịrị amị - uzommeputa
Ọkpụkpụ cat na-ekpo ọkụ bụ ihe onye ọ bụla kwesịrị ịma
Alakụba Kampung Aer
Esi ewepụ ájá site na akụrụ - ndụmọdụ dọkịta
Nri achịcha bakery bụ ihe ọma na ihe ọjọọ
Kedu esi kụziere nkịta ahụ na tray?